Jilli ODF Oromiyaa seenee ture gara Awurooppaatti deebi’e – Welcome to bilisummaa
PoliticsHorn of Africa
Akka ibsa dhaabichaatti mootummaan Itoophiyyaa marii biyya alaatti ODF woliin godhamuuf jedhame woggaa lamaaf lafarra harkisuu isaati kan ODF obsa fixachiisee murtee ufii isaa fudhateen gara Oromiyaatti akka deebi’uuf kan dirqe. Akka qorataan siyaasaa maqaan isaa akka hindhayamne jedhe tokkotti mootumaan Itoophiyaa ODF irraa shakkiifi sodaa guddaa waan qabuuf kan maritti seenuu didee rincicaa tureef. ‘Kanaaf ragaan,’ jedhu qorataan siyaasaa kuni, ‘biyya paartiin siyaasaa 79 filannoof qophaayaa jiran keessatti ODF fi hooggana isaa filannoo irratti akka hirmaataniif hayyamuu mitii biyya keessaa akka jiraatan EPRDF kan carraa laatu hintaane’. Kuni kan ifatti agarsiisu , akka yaada isaatti, ODF akka humnoonni tokko tokko itti hubatan osoo hintaane ija mootummaa biratti dhaaba hedduu sodaatamuudha. ODFf hiree biyya keessatti socho’u laatuun umrii ufii akka gabaabsuutti kanniin laalan angawoota EPRDF ol’aanoo keessa jiru jechuun nutti himan hayyuun siyaasaa kuni. ‘Dimshaashumatti, EPRDF humna morkataa cimaa ta’ee as bayu malu, keessattuu dhaaba Oromoo, Itoophiyaa keessatti arguuf ammatti qophii miti,’ jechuun ibsan.
Tags ADO EPRDF Leencoo Lataa ODF
Previous ODF Statement on the Recent Visit of its delegation to Addis Ababa
Next ODFn Ari’un Wayyaanee ABO jabeessuufi Haaromisuufi carraa haaraya uuma.